Xildhibaan Xasan Macalin oo ka hadlay kiiska kufsigii iyo dilkii Marxuumad Xamdi | Somalia News
Xildhibaan Xasan Macalin oo ka hadlay kiiska kufsigii iyo dilkii Marxuumad Xamdi
Xildhibaan Xasan Macalin oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa war ka soo saaray kiiskii dilkii iyo Kufsigii Marxuumad Xamdi Maxamed Faarax, isagoo xusay inuu daba taagan yahay falkaas.
Xildhibaanka ayaa sheegay in gacanta lagu haayo dhowr qof oo lala xiriirinayo falkaas, kuwa kalena lagu raad-joogo.
“Aniga oo ka mid ah ehelka iyo xildhibaanada marxuumadi Allaha u naxariistee Xamdi Maxamad Faarax Caroone-Gooni ku matala golaha shacabka waxaan rabaa in dhammaan ummadda Soomaalida u caddeeyo in dhibkii dhacay aan daba taaganahay, gacanta lagu hayo dhowr qof oo lala xiriirinayo falkaas, kuwa kalana lagu raad joogo. ayuu yiri” Xildhibaan Xasan Macalin.
Maalintii jimcihii ayay aheyd markii Marxuumad Xamdi Maxamed Faarax kufsi loogu geysto dhismo ku yaalla degmada Waaberi, oo ahaa Hotel, iyadoo markii dambe laga soo tuuray.
Booliska ayaa dad dhowr ah u qabtay falkaas, waxaana kiiskan uu noqday kii ugu naxdinta badnaa ee muddooyinkan soo mara Muqdisho, in gabar dhalinyaro ah inta la kufsado dabadeedna si xun loo dilo.
Previous articleIsrael seals agreement with the UAE, Bahrain in the White House
Next articleUS: Boolis jir-dil xun u geystay nin madow ah oo shaqada laga eryay